Inokurumidza Prototyping Service - Anebon Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Anebon haingopa chete masevhisi akagadziriswa ekushomeka vhoriyamu kugadzirwa kwezvigadzirwa, Tichifunga nezvekuvandudza kwemaindasitiri dhizaini, asi zvakare inopa inokurumidza prototype yekugadzirisa masevhisi. Kana iwe uine mapurojekiti matsva ari kuvandudzwa, isu tinogona kupa zvinhu zvakasarudzika mareferensi, machining maitiro uye epamusoro marapirwo. Uye mamwe mazano, Ita kuti dhizaini yako iwedzere kushanda, uchiona kugona kwako mune zvehupfumi uye nekukurumidza.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Rapid Kugadzira kwakasiyana nekuratidzira, mune izvo zvinoda mwero wepamusoro wekutarisa kune mhando, kudzokorora, uye zvakanyanya kuomarara zvinodiwa zvekugadzira zvigadzirwa. Panyaya iyi Anebon ndomumwe wevashoma muindasitiri iri yechokwadi inokurumidza kugadzira.
Isu tinogadzira mukugadzirwa kwemhando yepamusoro, yakaderera-mutengo prototypes. Tiine huwandu hwetekinoroji nemasevhisi, isu tiri vakakwana imwechete-yekumira-shopu kune zvako zvese prototyping zvaunoda.
Prototypes anobatsira kwazvo pakuvandudza dhizaini, uye mazhinji evatengi vedu anoda kukurumidza kuburitsa zvikamu zvemuviri kuti asimbise magadzirirwo kana kuwana mikana yenguva pfupi yekutengesa.
Sezvo zvikamu zvakawanda zvinogadzirwa mumashopoti ezvitoro mazuva ano zvinoda mashanu-mativi machining, 5-axis yekugaya uye machining masevhisi ari mukukwirira-kudiwa kwekushandisa kwakasiyana siyana mumaindasitiri akasiyana siyana anosanganisira indasitiri yemuchadenga, sitiri indasitiri, mota ichiratidzira maindasitiri pamwe nesimba maindasitiri ekugadzira. Machining mabhenefiti anosanganisira epamusoro-yepamusoro pevhu kupera, kumisikidza kurongeka, uye ipfupi nguva yekutungamira uku uchigadzira mukana wakakura wemikana mitsva yebhizinesi.
Nei uchisarudza Anebon yekukurumidza prototyping?
Kurumidza Kuendesa: Rapid prototype 1-7 mazuva epasirese kuburitsa, yakaderera vhoriyamu kugadzirwa kugadzira 3-15 mazuva epasi kuburitsa;
Mazano Anonzwisisika: Tsvaga mazano anonzwisisika uye ehupfumi kwauri pazvinhu, maitiro ekugadzirisa, uye marapirwo epamusoro;
Yemahara Assembly: Chirongwa chega chega chinoyedzwa uye kusangana pamberi pekusvitswa kubvumidza vatengi kusangana pamwechete uye kudzivirira kutambisa nguva kunokonzerwa nekugadzirisa basa.
Maitiro Ekuvandudza: Tine nyanzvi 1 kune 1 yekutengesa vashandi yekuvandudza kufambira mberi uye kutaurirana zvine chekuita nenyaya online.
Mushure mekutengesa Sevhisi: Vatengi vanogamuchira mhinduro kubva kuchigadzirwa uye isu tinopa mhinduro mukati maawa masere.